कुन कुन राशिका जोडीहरुबीच विवाहका लागि शुभ मानिदैन ?
/ २०७६, १२ फाल्गुन सोमबार ०२:३२ प्रकाशीत
काठमाण्डौ- कुन-कुन राशि भएका व्यक्तिहरुको जीवन सुखमय हुन्छ ? कुन-कुन राशिबीच बिवाह हुँदा उनीहरुको सम्बन्धमा खटपट हुन्छ भन्ने विषयमा पनि फलादेश गरिन्छ । विवाह हुनुपूर्व मानिसहरुले वर र बधुको चिना देखाएर मात्र लगन जुराउने गर्छन् । आज हामीले कुन कुन राशि भएकाहरुबीच विवाहका लागि शुभ मानिदैन भन्ने विषयमा चर्चा गरेका छौं
मीन र तुला – तुला राशिका व्यक्ति प्राय आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्छ मीन राशिको आफ्नो जोडीमा निर्भर रहन्छन् ।यद्यपी, मीनलाई यसप्रति खासै आपत्ति हुन्न, तर आँफूलाई तुला राशिका लागि आवश्यक रहेको ठान्ने भूल गर्छ र सम्मान नमिलेमा उनका लागि तनावको कारण बन्न सक्छ ।ध
कन्या र मेष– कन्या राशिका व्यक्ति प्राय शान्त स्वाभावका हुन्छन् र विवादबाट बच्न चाहन्छन्, त्यसैले धेरै जसो झगडा, विवादआदिबाट बच्न अर्कोको कुरा मान्ने गर्छन् । तर, यसको फाइदा मेष राशिले उठाउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मेष राशिलाई आफ्नो जोडीबाहेक अरु केही मान्दैनन् । फागुन १२ मा प्रकाशित